SOHEDA oo Waxbarasho Bilaash Ah Siisa Ubadka Kasoo Jeeda Beelaha La Heyb Sooco | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Arimaha Bulshada SOHEDA oo Waxbarasho Bilaash Ah Siisa Ubadka Kasoo Jeeda Beelaha La Heyb...
SOHEDA oo Waxbarasho Bilaash Ah Siisa Ubadka Kasoo Jeeda Beelaha La Heyb Sooco
Muqdishi (XT): Inkasta oo ay Soomaali dhadhamisay kharaarka kala qoqobnaanta iyo qabyaaladdu leeyihiin, hadana waxaa jira dadyoow bulshadeenna kamid ah oo waxqabad iyo farsamo ku caan baxay, hadana lagu heyb sooco sabab la’aan. Dadkaasi waxa ay inta la xasuusto taraiikhda Soomaalida ahaayeen kuwa dhanka guurka lagu heyb sooco, waxaase xusid mudan in waqtiyadan dambe wacyiga bulshada uu sare u kacay oo xitaa guurka dadkaasi la takoori jiray uu yaraaday waayadan dambe.
Xildhibaan Yuusuf Xayle Jimcaale oo ah xubin ka tirsan Golaha Shacabka, horena usoo noqday Wasiir K/Xigeenka Awqaafta iyo Arrimaha Diinta ee Xukuumaddii Ra’iisul Wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed, ayaa bishii Maarso ee 2013 waxa uu aasaaska u dhigay Hay’adda Gargaarka Bani’aadamnimada, Waxbarashada iyo Horumarinta Soomaalida oo afka qalaad loogu soo gaabiyo SOHEDA. Sababta loo aasaasay hay’addan ayaa ahayd sidii dhallaanka kasoo jeeda dadka la hayb sooco ee dan yarta ah looga taakuleyn lahaa in ay helaan waxbarasho bilaash ah oo ay bixinayso hay’addan maadaama la ogaaday in jahligu yahay waxa ugu horreeya ee qof looga takoori karo bulshada inteeda kale.
Xildhibaanka, oo isaga laftiisa kasoo jeeda beelaha la takooro, ayaa isaga oo kaashanaya qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed waxa uu gunta dhiisha isaga dhigay sidii wax loo bari lahaa ubadka ay dhaleen dadkaasi dan yarta ah oo ay ula mid noqon lahaayeen xagga koboca iyo tacliinta dhallinta asaagooda ah.
“Si loola dagaallamo takoorka lagu hayo beelo Soomaaliyeed oo dhaqan, af iyo diin intaba la wadaago beelaha kale ayaan go’aansaday in carruurtaas tacliin tayo leh oo lacag laa’aan ah la siiyo, laga dhigo kuwo berri aan tayo xumo loo takoorin ee tacliintooda lagu qadariyo. Ujeedada ugu weyn ayaa ah in ay mustaqbalka noqdaan dad aqoon ahaan isku filan, dalka wax kusoo biirin kara, la guursan karo iyagana ay wax guursan karaan. Taasna waxaa suuragelin kara in wax la baro oo jahliga laga saaro” Ayuu yiri Xildhibaan Xayle oo Wargeyska Xaqiiqa Times u warramayay.
Carruurta ay hay’adda SOHEDA gacanta ku heyso.
Hay’addan oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ayaa haatan dugsiyo kala duwan oo isugu jira hoose, dhexe iyo sare waxa ay ka bixisaa ardey tiradoodu ay gaareyso 896 oo 90% ay kasoo jeedaan beelaha la heyb sooco, halka 10% ay yihiin ilmo agoon ah iyo kuwa ay waalidkood ka bixin waayeen lacagta iskuullada. Waxaa kale oo jira 11 ardey oo ay SOHEDA ka bixiso jaamacadaha magaalada Muqdisho.
Gudoomiyaha SOHEDA Maxamed Cali Daahir ayaa Wargeyska u sheegay in taniyo aasaaskii hay’addan uu si mutadawacnima ah ugu shaqeynaayay sidii loo hormarin lahaa dhinacyada bani’aadamnimo iyo waxbarasho ee qoysaska kasoo jeeda beelaha la heyb sooco iyo waliba dadka kale ee Soomaaliyeed ee tabaaleysan.
Maxamed ayaa ah nin dhallinyara ah oo ay firfircooni iyo dadaal dheeri ah ka muuqato, una diyaarsan sidii shacabka Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan dadkan la heyb sooco loogu heli lahaa tacliin bilaash ah maadaam aysan jirin dowlad hanan karta waxbarashadooda.
SOHEDA waxa ay leedahay Gudoomiye, Kuxigeen, Xoghaye iyo Gudi maamula hay’adda oo ka kooban 6 xubnood, uuna kamid yahay aasaasaha hay’addan Xildhibaan Yuusuf Xayle. “Guddiga SOHEDA waxa ay ka koobanyihiin qabaa’il kala duwan. Sababtuna waxa ay tahay, waxa aan dooneynaa inaan takoorka iyo dibu dhaca bulshadan heysta laga saaro. Si taas looga dhabeeyana waa in hay’adda lafteeda aysan noqon mid dhiirrigelisa takoorka iyo cunsiriyadda ay dadkaasi ka sheeganayaan.” Ayuu yiri Gudoomiye Maxamed oo isagu aan kasoo jeedin beelaha la takooro.
Ma aha oo kaliya in hay’addan ay xoogga saarto waxbarashada nidaamsan ee waxaa jira in ay sidoo kale ka furtay degmada Yaaqshiid Dugsiga Xifdinta Qur’aanka ee Sheekh Cabdulmajiid Sheekh Cabdulqani oo ay haatan wax ka bartaan ardey gaareysa 136 si tacliinta diiniga ah loogu barbaariyo ubadka beelaha la heybsooco kasoo jeeda. Gudoomiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri “canug walba iskuulka ugu dhaw ayaan ka diiwaangelinnaa maadaama ay kharash kale tahay in xaafad laga soo wado oo mid kale la geeyo. Waxaa kale oo jira in aan iskuullada kale u geyno si ay u dhex galaan ardeyda kale oo ay u noqdaan dad aan kala soocneyn.”
Deeqoow Abuukar Maxamed waxa uu kamid yahay ardey heer jaamaceed dhigata oo kasoo jeeda beelaha la heyb sooco. Waxa uu Farsamada Shaybaarka ka dhigtaa Jaamacadda Plasm ee magaalda Muqdisho. Mar aan weydiiyay hankiisa iyo himiladiisa dhaw iyo midda fog waxa uu yiri “Waxaan rabaa inaan noqdo qof cilmiga uu bartay ee Shaybaarka ah looga dambeeyo. Hadda waxaan dhameeyay laba sano iyo bar, waxaana jeclahay in aan jahli la igu heyb soocin oo aan aqoonteyda meel sare ku gaaro.”
Gabdhaha ay Jimciyadda waxbarashada ka bixiso oo gudoomaya agab ay guddoonsiisay Xawaaladda Juba Express.
Jimciyadda SOHEDA waxa ka caawiya tasiilaadka ay carruurtan ay ku maareyso 100 qof oo oo isugu jira ganacsato, siyaasiyiin iyo shirkado ay leeyihiin dad Soomaaliyeed oo si joogta ah u bixiya qaaraanka carruurtan lagu bixiyo. Waxa ay maamulka hay’addan ka codsanayaan bulshada Soomaaliyeed in hawshan khayrka badan lagala qayb qaato maadaama ay walba SOHEDA tahay hay’ad ku dhisan taakulada umadda Soomaaliyeed.
Dhamaan bulshada Soomaaliyeed ayay jimciyaddan waydiisaneysaa in wixii taakulo dhaqaale ah ama waxbarasho bilaash ah ay la garab istaagaan si carruurta dadka la heyb sooco looga dhigi lahaa kuwa aqoon ahaan la jaanqaadi kara asaagooda. Ciddii caawineysa waxa ay ugu soo hagaagi karaan cinwaanada hoose.
F.G: Qofjii kaalmo soo gaarsiineysa hay’adda aan kor kusoo xusnay waxa ay cinwaannada ka heli karaan mareegta hoose.
Salaama Bank Acc. 30283623
Previous articleSaameynta Dagaalka Yaman uu Soomaaliya Ku Yeelan Karo
Next articleWasaaradda Ganacsiga oo Baareysa Tayada Badeecooyinka Soomaaliya Loo Soo Dhoofiyo